ကိုယ်တိုင် Self-Study လုပ်ခြင်းကနေ ဘယ်လို အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိနိုင်လဲ???
၁. Study anywhere, anytime
Self-study လုပ်ခြင်းရဲ့ ပထမဆုံးအကျိုးကျေးဇူးကတော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အချိန် ကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာ စာလေ့လာနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်.ကိုယ်ကိုယ်တိုင်စာလေ့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် စာရှင်းပြဖို့တစ်စုံတစ်ယောက်ကို စောင့်ဆိုင်းရတာမျိုး အချိန်ညှိရတာမျိုးတွေမရှိပါဘူး. ကိုယ်စိတ်ပါဝင်စားတဲ့အချိန်မှာမှ စာလေ့လာနိုင်တာက Self-Study လုပ်ခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ္.
၂. Study at your own pace
Self-Study လုပ်ခြင်းရဲ့ ဒုတိယကောင်းကျိူးတစ်ချက်ကတော့ ကိုယ့်အရှိန်နဲ့ကိုယ် သင်ခန်းစာတွေလေ့လာနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်. ဥပမာ Group Study လုပ်တာမျိုးတွေ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်နဲ့စာလုပ်တာမျိုးတွေမှာလည်း သူ့နေရာနဲ့သူကောင်းကျိုးရှိပါတယ်. ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေမှာ Group study လုပ်ရင် အဖွဲ့ထဲက တစ်ယောက်ယောက်က သေချာမရသေးလို့စောင့်ရတာမျိုးတွေ ကိုယ်သေချာနားမလည်သေးတဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို အများနဲ့မို့ကျော်လိုက်ရတာမျိုးတွေရှိနိုင်ပါတယ်. Self-Study သာသေသေချာချာလုပ်နိုင်မယ်ဆို ကိုယ်ရတဲ့သင်ခန်းစာတွေကျော်သွားပြီး ကိုယ်မပိုင်နိုင်သေးတဲ့ သင်ခန်းစာတွေပေါ်မှာ ပိုမိုအချိန်ပေးလိုက်နိုင်ပါတယ္.
၃. Creatingagood habit
Self-Study စလုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်စာလုပ်ချိန်အတွက် မဖြစ်မနေ တစ်နေ့ကို တစ်နာရီဖြစ်ဖြစ် နှစ်နာရီဖြစ်ဖြစ် အချိန်ပေးရတော့မှာ အမှန်ပါနော်. Self-Study မလုပ်တဲ့အချိန်ထိ တော်တော်များများက စာကြည့်မယ် စာကြည့်မယ်ဆိုပြီး အမြဲတမ်းအနောက်ရွှေ့ဖြစ်တာပဲများပါတယ်. ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် Self-Study လုပ်မယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာနဲ့ စာကြည့်ဖို့အတွက် အချိန်ပေးရင်းနဲ့ နောက်ပိုင်း နေ့စဉ်ပုံမှန် စာလုပ်တဲ့အကျင့်လေးတစ်ခု ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ္.
၄. Enable you to learn and work at the same time
အလုပ်လည်း မပျက်ချင်ဘူး တစ်ဖက်မှာလည်း စာလေ့လာချင်တယ်ဆိုတဲ့ သူတွေအတွက် Self-Study လုပ်တာက အသင့်တော်ဆုံးသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်. မိမိကြိုက်တဲ့အချိန် အားလပ်တဲ့အချိန်မှ အချိန်ပေးပြီး သင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် တစ်ဖက်မှာအလုပ်လုပ်နိုင်သလို တစ်ဖက်မှာလည်း မိမိရဲ့ Career အတွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမယ့် သင်ခန်းစာအသစ်အသစ်တွေကို လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ္.
၅. Keep up with the changes in your industry
ကိုယ့်ရဲ့ Career တိုးတက်ဖို့အတွက် Continuous Learning ဆိုတဲ့ အဆက်မပြတ်လေ့လာမှုတွေလုပ်နေဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်. အချိန်မပေးနိုင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ Self-Study လုပ်ပြီးသာ လေ့လာနိုင်မယ်ဆို အမြဲတမ်းအပြောင်းအလဲဖြစ်နေတဲ့ ဒီလိုခေတ်ကြီးထဲမှာ ကိုယ့်ရဲ့ Industry ထဲက အပြောင်းအလဲတွေကို အချိန်နဲ့အမှီသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ္.